Khudbaddii Khudbada Cilmi-ku-hadalku wuxuu ku saabsanaa Spamerka ugu Khatarsan Emailka ee Dunida
Julian Vashneva, Maareeyaha Guuleysiga Macaamiisha ee 8 Semt Adeegga Dijitaalka ah, ayaa kuu sheegi doona spamerka ugu caansan uguna khatarta badan adduunka - Ruushka Ruushka, Peter Levashov.
Wakiilada Federaalka waxay u socdaalayeen Moscow dhowr sano ka hor si ay ugu biiraan kaalinta Ruushka. Waxay doonayeen in ay soo xiraan spammers ee ugu khatarsan ee caalamka laakiin waa la diidey - casino forum. Shirkad sharci fulin ah oo Mareykan ah ayaa ku wargelisay arrintaas. Spammer wuxuu u adeegsaday magaca Peter Sevara waxaana ilaaliyay xukuumada Ruushka. Sidaa darteed, qofna ma taaban karo ama dhaawacayo. Ugu dambeyntii, wakiillada ayaa dib u soo laabteen oo sugayay illaa ay bartilmaameedkoodu khalad sameeyaan.
Warka wanaagsani waa inuu qalad sameeyey oo uu tagay Barcelona fasaxa. Xukuumadda Spain ayaa sannadkii ka dambaysay, ka dibna askartii bilaysku waxay ku dhufteen qolalka hudheelka ah ee ku yaala xayawaankaas iyo xaaskiisa kale. Waxaa la xiray wakhtigaas, iyo saraakiisha internetka ee Xafiiska Baaritaanka Federaalka ayaa go'aansaday in ay baaraan kiiskan. Ninkan xun ayaa xiray tiknoolajiyadii kumbuyuutarrada isaga oo daadinayay fayraska. Ugu dambayntii, Wasaarada cadaalada ayaa sii daaya waraaqaha maxkamadda ee ku eedaynaya khayaanadaas. Magaciisa hore waa Peter Levashov. Waxaa lagu eedeeyay khiyaano iyo isku-day sharci-darro ah wada-hadalada elektarooniga ah. Peter ayaa la filayay in loo wareejiyo Mareykanka si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo..
Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in la xiray oo shabakadiisu waxay ahayd mid aad u ballaaran. Muddo sanado ah, ninkan wuxuu adeegsaday boqortooyadiisa si uu u kobciyo naftiisa isaga oo ku dhaqaaqaya waxqabadyo been abuur ah. Madaxweynaha Donald Trump ayaa rajeynaya in waraaqdani ay si dhakhso ah u arkaan. Xilligii hore, Kremlin ayaa xayiraadii la midka ahayd ee dalka oo idil. Booliska Spain ayaa si guul ah u xiray Mr Levashov; iyo kahor, waxaa lagu xiray dal kale laakiin waxaa la sii daayay sababo la xiriira ka qayb qaadashada xukuumadda Ruushka.
Hadda, waxaa la rajeynayaa in qaar badan oo kale spammers loo xiri doono maadaama dowladdu ay tallaabooyin adag ka qaadayso iyaga. Saraakiisha bilayska iyo wakiilada internetka ayaa ka danbeeyay Levashov muddo sannado ah, si ay u noqdaan tan laga soo bilaabo 2006. Ilaa hadda, ninkan ayaa sameeyay lacago trillions oo dollar ah isaga oo adeegsanaya shabakad saaxiibadiisa ah waxana uu jabsaday kombuyuutaro badan oo lagu ciribtiray nacasnimadiisa (Kelihos).)
Qiimaha ololaha spamku wuxuu u dhexeeyaa min 300 ilaa $ 700 email kasta. Waxa uu bixiyay qiimo dhimis ah macaamiishiisa, iyaga oo ku dhiirrigeliyay dalabkiisa waxayna doonayeen inay xado lacagtooda. Bartilmaameedka ugu weyn ee Mr. Levashov wuxuu ahaa kombiyuutar Maraykan ah. Ilaa hadda, ma cadda sababta uu naftiisa halis ugu galiyay adigoo u safraya qoyskiisa. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaasha internetka ayaa sheegaya in uu isku dayay inuu qariyo aqoonsigiisa inta uu ka guurayo Ruushka iyo Spain.
FBI waxay heshay warar sheegaya in Levashov uu ka tagay waddankiisa islamarkaana u safro Barcelona si uu u baxo. Saraakiil bilays ah oo Maraykan ah ayaa qaaday tallaabo degdeg ah oo ay doonayeen in ay soo xiraan isaga sida ugu dhakhsaha badan. Intii hawshu socotay, wakiilada FBI waxay adeegsadeen awoodo la siiyay iyada oo la adeegsanayo wax ka beddelka waxa loogu yeero Xeerka 41 ee Xeerarka Federaalka ee Nidaamka Dambiyada. Waxay u ogolaatay inay joojiyaan qofkaas inuu ku dhaco kumbiyuutaro badan oo badan oo leh fayrasyo. Hadda, Levashov wuxuu rabaa in uu naftiisa intiisa kale xabsi ku dhigto